Tratran’ny vela-pandriky ny polisy: sarona ilay mpandefa hafatra mifono fisolokiana amin’ny SMS | NewsMada
Par Taratra sur 01/12/2020
Tsy vitsy fa efa marobe ireo olona nitaraina ho nahazo hafatra amin’ny alalan’ny SMS, milaza fa “ianao dia mahazo loka, fiara…”. Ela ny ela, tratran’ny vela-pandriky ny polisy, teny Anosibe Angarangarana ihany ity mpandefa hafatra mifono fisolokiana ity.
Efa maro ireo olona nahazo hafatra mifono fisolokiana milaza fa « ianao dia nahazo fiara Sprinter avy amin’ny orinasa Akoalma Mahajanga ka iangaviana ianao hiantso ity laharana ity 03… » na koa hoe « misy fisarihana nataon’ny orinasa voanio aty Sambava dia ianao no tsara vintana nahazo ny fiara 4×4 Prado iray, koa iangaviana ianao hiantso ity laharana ity 03… ». Raha ny fanazavan’ny misahana ny heloka bevava , sakelika voalohany (BC1), ho an’ny olona tsy mahalala dia miantso ilay laharana telefaonina finday tokoa. Rehefa miresaka eo ilay mpisoloky dia milaza fa mila mandefa vola ilay olona voasarika tamin’ilay fisarihana atao solika hitondrana ilay fiara miakatra aty Antananarivo. Ho an’ireo olona taitaitra, betsaka no efa voasolokiny ka nandefa vola tokoa mba handefasana ilay fiara, kanjo inona akory ny eo, tsy misy ilay fiara fa hosoka avokoa. Rehefa lasa ny vola, tsy mandeha intsony ilay laharana telefaonina nalefan’ireo mpisoloky. Efa nisy mpitandro filaminana mihitsy koa aza naharay hafatra « SMS » avy amin’ireto mpisoloky ireto, raha ny loharanom-baovao voaray.
Mifindrafindra toerana ilay mpisoloky…
Manoloana izany indrindra, maro ireo olona tonga nametraka fitoriana teny amin’ny polisy. Nandray ny andraikiny avy hatrany ny polisy avy eo anivon’ny fikarohana heloka bevava (BC) Anosy, nanao ny fanadihadiana sy ny angom-baovao rehetra. Nisy ny vela-pandrika nataon’ny polisy ka tratra teny an-tranony eny Anosibe Angarangarana ity mpisoloky ity. Nilaza izy nandritra ny fanadihadian’ny polisy fa mifindrafindra toeram-ponenana ka tao an-tranon’ny sakaizany izy ity tratra ity. Miantso ny besinimaro hatrany ny polisim-pirenena mba ho mailo fa maro tato ho ato izay ireo mpisoloky avolenta. Efa tambajotra mihitsy ireto mpisoloky milaza fa « ianao dia nahazo loka fiara… » ireto, saingy mbola ao anatin’ny fanadihadiana tanteraka ny polisy amin’izao fotoana izao. Tokony hojeren’ny tompon’andraikitra akaiky itony mpisoloky mametsifetsy olona itony ka andraisana fepetra henjana mihitsy eny amin’ny fitsarana.